စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် သတ္တမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် | Commerce Journal
Home » Latest News » စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် သတ္တမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် သတ္တမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
Wed, 11/25/2020 - 11:44 -- journal_editor
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၃၀) နာရီအချိန်တွင် သတ္တမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးကို စီးပွားရေးနှင့် ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညီလာခံခန်းမ၌ Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Ministry of Commerce and Industry, Railways, Consumer Affairs, Food and Public Distribution ဝန်ကြီး H.E. Mr. Piyush Goyal တို့မှ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အကူအညီပေးအပ်နေမှုများအပေါ် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ မြန်မာ-အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အထည်အလိပ်၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပိုမိုတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းများကြုံတွေ့လျက်ရှိရာ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအကြား ယခုကဲ့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် အခက်အခဲများကို အတူလက်တွဲ၍ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ယနေ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ် များသည် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များကိုရှာဖွေရန်အတွက် ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်းနှင့် မိမိတို့အနေဖြင့် အပြန် အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အခြားကဏ္ဍများတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နီးကပ်စွာအပြုသဘောဆောင်၍ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Piyush Goyal က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် နှစ်နိုင်ငံပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့် တင်ရန် အတွက် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် MYANTRADE နှင့် India Trade Promotion Organization (ITPO)တို့အကြား နီးကပ်စွာပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက် ရှိပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်း/တံတားစီမံ ကိန်းများကို ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသစွာဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက်အပံ့များကို ဆက်လက်ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်သာမက အခြားကဏ္ဍများတွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းအားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းမင်းက ယခုအစည်းအဝေးမတိုင်မီ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် နှစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအဆင့် Senior Officials’ Meeting အစည်းအဝေးတွင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သောကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏ တိုးတက်စေရေးအတွက် ပဲမျိုးစုံအပါအဝင် မြန်မာပို့ကုန်များ အိန္ဒိယဈေးကွက် သို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ကုန်စည် ပြပွဲများ၊ စီးပွားရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ မြန်မာ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား နယ်နိမိတ်ကိစ္စရပ်များရှင်းလင်းပြီးသည့် နေရာများတွင်နယ်စပ်ဈေးများကို ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ရေး၊ မြန်မာ့အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ ဈေးကွက်ပိုမိုတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင် ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နည်းပညာအကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုလွယ်ကူ လျင်မြန်စေရေး အတွက် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်ရှိ လမ်း/ တံတားစီမံကိန်းများအား အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံဘဏ်များအကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာပူး ပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် ASEAN India Trade in Goods Agreement အား Review ပြုလုပ်နိုင်ရေးအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အလားအလာရှိသည့် နယ်ပယ်များတွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များပေါ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရရှိမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ သည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအဆင့် Senior Officials’ Meeting အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်ပါ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့် စွက်မှာကြားခဲ့ကြပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအခြေခံ၍ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကဏ္ဍစုံ၌အပြန်အလှန်အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ယခုထက်ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြ ရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။
အဋ္ဌမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် လာမည့်နှစ်အတွင်း နှစ်ဖက်အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် ကျင်းပသွားရန်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာ နိုင်ငံဘက်မှ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့် နှစ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် များက Video Coferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။